CGM – « Ankiz’Mozika Festival »: hanasongadina ny talentan’ireo kilonga madinika | NewsMada
CGM – « Ankiz’Mozika Festival »: hanasongadina ny talentan’ireo kilonga madinika
Nitsimoka ny hevitra taorian’ny nahitana ny fahaiza-mitendry zavamaneno eo amin’ireo ankizy nandray anjara tamin’ny « Jazz kids ». Mila omena sehatra vaovao hatrany izy ireo…
Hanatanteraka fifaninanana ho an’ny ankizy 7 ka hatramin’ny 13 taona ny departemantan’ny kolontsaina eo anivon’ny Cercle Germano-Malagasy/Goethe-Zentrum. « Ankiz’Mozika Festival » hotanterahina ao amin’ny Park Okalou Ankadifotsy, ny 21 oktobra izao, manomboka amin’ny 12 ora antoandro. Raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra avy ao amin’ny CGM ho an’ity andiany voalohany ity, ireo ankizy mianatra any amin’ireo sekoly fampianarana mozika eto an-dRenivohitra no hifaninana ka tsy ho ferana ny zavamaneno sy ny gadona hotendren’izy ireo amin’izany. Afaka mitendry ny mozika jazz, ny klasika, ny nentin-drazana, sns.
Tsy any amin’ny maha fifaninanana azy loatra ny tanjona ho an’ny « Ankiz’Mozika Festival » fa amin’ny maha hetsika mikendry fanabeazana sy fanentanana ny ankizy hahay andraikitra sy hibanjina ny zava-misy ka handray ny mozika ho anisan’ny sehatra manabe azy ireo, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra hatrany.
Anisan’ny handray anjara amin’izao andiany voalohany izao ny mpianatra avy ao amin’ny CGM/GZ, ny LMM, ny Aria Academy, ny avy ao amin’ny Centre d’éducation artistique Volahasiniaina, ny mpianatr’i Andry Michael Randriantseva, ny mpianatry ny Centre d’éducation musicale Laka, ny Jejy music institute, sns.